Iifayile ze-Exorcist: Kutheni kuyimbono embi
Kuphi na Imfihlelo
Iifayile ze-Exorcist: Kutheni le nto imbi kakhulu
Iifayile ze-Exorcist ziza kubangela abaninzi beedemonologist abazibiza ngokwabo kunye nabarhoxisti, abanokwenza okubi ngaphezu kokulungileyo
I-Discovery Channel yasanda kutshengisa umboniso omtsha weTV obizwa ngokuba yi -Exorcist Files , eceba ukuba uqalise ixesha lokuqala kwi-Spring ka-2011. Le ngcamango engalunganga yezizathu ezininzi.
Ndiyakrokreza ukuba ayiyi kuba yinto embi kwiSitayile sokuFumana. Izihloko zokukhwabanisa kunye needemon zihlala zitshisa ngoku, kunye namafilimu ambalwa asanda kuveliswa kwizifundo, ngoko kubonisa ukuba ukulinganisa kuya kuba kuhle kakhulu.
Kwaye, ke, ukuba ngumabonwakude, ngabo bonke abavelisi bemiboniso bakhathalele. Yonke into engacingelwayo kukuba ifowuni yexhala le-TV elingenakunqwenelekayo lokuzibonakalisa, nokuba lifanelekileyo okanye lihlaselayo okanye ingabi (eqinisweni, kungalunganga okanye kuhlasele umxholo, kulunge ngakumbi ukufikelela kwimiba ephakathi), kutheni kungabikho abantu abasenokubandezeleka iidemon?
Kuyavunywa, andisayi kubona umboniso, ngoko andinakukwazi ukubeka izimvo malunga neenkcukacha zalo mboniso, kodwa ngokubhekiselele kwinqaku elisekelwe kwimpahla yokukhuthazwa, "uchungechunge luya kuphinda lilandelele amabali 'obomi bokwenene' kunye nobutyebi beedemon, ngokusekelwe kwiimeko uphando ngeCawa yamaKatolika. "
Nangona andikukhuthazi ukuba umbukiso kufuneka ucatshungulwe, ndicinga ukuba kuya kuba nemiphumo emibi. Nantsi into endiyithethayo iya kwenzeka ngenxa yolu boniso:
UKUQHUBEKA KWEENKQUBO ZEZINTLOKO "NEEMVIWO"
Ukufika koMoya wabaHlengi kwiSyfy channel eminyakeni emininzi edlulileyo, kunye nokuthandwa kwayo, kwaphumela ekuhlanganisweni kwamakhulu amaninzi amaqela okuzingela abafileyo emhlabeni wonke, nakwamanye amazwe.
Bonke babefuna ukufana noJason noGrant.
Ngokufanayo, ngokukhwaza kweefayile ze -Exorcist , sinokulindela ukunyuka kwinani labantu abathile "abademoni," "iidemonologist" kunye "nabazingeli beedemon." (Enyanisweni, andiyikumangaliswa ukuba impumelelo yeeForporist Files zenzeke ngokufanayo kwimiboniselo yezinye iintambo zetambo; lindela enye ebizwa ngokuba yiDemonHunters .) Bayakufuna ukuxelisa abaxosheli kwimiboniso.
Kutheni le nto yinto embi: Ininzi yalezi zidemonoloji ezizibiza ngokwazo azikwazi ukuba isihogo senza ntoni. Baya kungena amakhaya abantu, baxelele ukuba izindlu zabo zilawulwa yiidemon, zibaxelele ukuba zithwele (kwiimeko ezibuhlungu kakhulu, ukuba abantwana babo baziphethe), kwaye zikwazi ukukhupha ezi ziidemon.
Oku kuya kunika imvume kuyo yonke i-dummy ngaphandle ukuba ingene kumakhaya angasese kunye neminqamlezo ejikeleze iintamo zabo, izibambiso zamanzi angcwele, iiBhayibhile ezidala kunye neikopi zokukhwabanisa kwaye zithi zimelela amandla kaThixo ukuba anqobe uMtyholi. Kwaye abantu baya kubavumela kuba, ngokuqinisekileyo, kwenziwa kwithelevishini, ngoko kufuneka kube yinto enokuyenza.
OKUYE KUNYE NOKUBHALA KWEZINDAWO
Amaqela okuzingela amaMoya, kunye nezimbalwa ezimbalwa, musa ukulimaza. Ngokubanzi ziphanda iindawo ezinobuncwane ezifana neendawo zokuhlala, iihotele ezindala, izibhedlele ezilahliwe, kunye nezinto ezinjengeenkcukacha zokubanjelwa. Nangona ngezinye iinkqubo banokuphanda ikhaya langasese xa bebememo, oku akukho umkhuba wabo oqhelekileyo. Kwaye xa bathatha indlu yangasese, baphonononga indlu - isakhiwo - kungekhona abantu abahlala khona.
I-Exorcism, ngokucacileyo, yodwa. I-exorcist isebenzelana nabantu abakholelwa ukuba banomoya obi.
Kwaye i-demonologist eyenza i-exorcism rite kubo, ingaba ngabanye, isiqinisekiso sokuthi sinabo. Le nto inezo zonke iintlobo zengozi yokulimaza.
Ycinge. Ingcamango yokuba wena - ubunikazi bakho, ubuntu bakho, umphefumlo wakho , ukuba uya ku-uphethwe okanye utyeshelwe ngumoya obi omoya uyamangalisa. Inokuchaphazela umntu kwinqanaba elengqondo leengqondo, ingakumbi ukuba unokholo olukhutheleyo. Kwaye ukuba umntu ongaziqeqeshwanga, ongagqibekanga angene kwaye enze ukukhwabanisa kungaba yingozi. Futhi musa ukwenza iphutha, kuya kwenzeka. Ezi ziza kuba ziidemonologists ziza kuzibona kwiTV, mhlawumbi zifunde amanqaku ambalwa okanye iincwadi, kwaye zicinga ukuba zifanelekile ukuthatha eli shishini.
Ingaba iidemon ziyinyani okanye akunjalo. Abantu ababandakanyekayo bakholelwa ukuba bangokoqobo.
Kukho naziphi na izizathu zokuba umntu angabonakalisa njani ukuziphatha abazalwana abakwenzayo kwiidemon, kwi-schizophrenia ukuya ekuxhatshazweni ngokwesini ukuya kubantwana abaselula. Le yimiba yonyango ogqirha, abagula ngengqondo, izazi zeengqondo kunye nabaqeqeshi abaqeqeshwayo-kungekhona umntu obukele umboniso weTV kwaye ufunde incwadi okanye ezimbini, kungakhathaliseki ukuba zithetha njani.
Kwaye ukuba umntu unomoya obi ngokwenene, yiso sonke isizathu sokungabi namntu ongalungeleleneyo onamathele ekhaleni lakhe. (Oku kuphakamisa imibuzo: Ngubani na oqeqeshelwe umsebenzi onjalo kwaye bafaneleke njani? Ewe, iSonto lamaKatolika liqeqesha abaxosheli balo, kodwa ngaphaya koko, andiyazi.)
Ikhasi elilandelayo: Eninzi isizathu sokuba le nto ingalunganga
Ndithe ndatsho oku ngaphambili kule website kwaye ndiya kuphinda nditsho kwakhona kuba ndivakalelwa kakhulu. Le shishini elithintelayo lingabangela ingozi kubantwana. Ukuxelela umntwana onengqondo ukuba unesidemon esibi - engazi ukuba inyaniso kunye neepesenti ezingama-100 ( kwaye akukho nanye i-100 ekhulwini eliqinisekileyo lolo lwazi ) - lilungelelanisekanga kwaye lixhaphaze kakhulu.
Ubunako bokulimala kwengqondo - ingakumbi ukuba umntwana sele ehlaselwe ngokwengqondo-uphakamileyo.
AKUBA UHLU LOKUPHILA
Icawa yamaKatolika iye yaqhuba ukukhutshulwa kweenkulungwane, kwaye kude kube sekugqibeleni umkhuba ugcinwe ukhululekile. Kwaye ngenxa yezizathu ezifanelekileyo: yinto ebalulekileyo yecala. Icawa iqhuba uphando oluphambili ngaphambi kokusebenzisa ukukhwabanisa, kubandakanya ukuhlolwa kwezonyango kunye nengqondo zeentlobo ezahlukeneyo. Kuphela xa le mvavanyo iphelile ukuba iCawa inika imvume yokukhwabanisa. Kuyinto yokugqibela, kwaye ityala kufuneka liqiniseke kwaye linzima.
Ngaba ucinga ukuba unonophelo olunjalo luya kuthathwa ezandleni zabademonoloji abafundiswe ngeTV? Andiyiqondi.
(Qaphela: Kwimvelaphi, i-PR ye- Exocism Files ithe yaveliswa ngentsebenziswano yeVatican.I-Vatican inqatshile le nto. "Inqaku le-Fox News lithi:" Ngokwamagosa amaninzi aseVatican, iCawa yayingekho igosa ukubandakanyeka kwimixholo kwaye iVatican ayinayo iqela labaxhasi. ")
AmaKatolika awayiyo kuphela idemokhrasi yokwenza ukukhwabanisa, kunjalo. Kukho amaqela amaninzi ama-Christianististist akwenza "ukuhlangula" karhulumente, kwaye ndibonayo (kwi-TV yazo zonke iindawo!) Zizintlu ezingenanto yokwenza izinto ezingokomoya kunye nento enokuyenza ngokuzonwabisa.
Kwaye ngoku siya kuba nomboniso weTV ozinikezele kwisithethe. Akumangalisi, ndiyicinga, kwinkcubeko yethu yangoku apho nayiphi na into - kungakhathaliseki ukuba yintoni okanye ingcwele - iyancitshiswa ibe yinto yokuzizonwabisa ngendlela yokubonisa ithelevishini.
Ndingayichaza njani ukuba kuya kuba nokunyuka kwamademonologist ekhulile ekhaya ngenxa yolu boniso? Ngenxa yokuba abantu bangabalandeli, ngokukodwa izinto abazibonayo kwiTV nakumafilimu. Siphila kwinkcubeko yeCult (of-celebrity-Famous) (yintoni enye yokuchaza iParis Hilton kunye neSnooki?). Sithandazela udumo, kungakhathaliseki ukuba luphawuleka kangakanani, kwaye sifuna ukufana nabantu esibabonayo kwisikrini.
Ngokuqinisekileyo asiyi kuba nenani elikhulu lamaqela okuzingela abafileyo ngaphandle ukuba akubangelwa yi- Ghost Hunters kunye nolunye uphando lomoya. Le nto ayikho into embi, inxalenye enkulu. Amaqela amaninzi azingelayo ahamba ngokuzibandakanya kunye neentlonelo kubaxhasi babo, kwaye baye bancedisa ekufundweni kwezinto eziphathekayo kwi-teknoloji entsha kunye nokuqokelela kwedatha engathintekiyo, kuquka i-EVP, iifoto kunye nevidiyo.
Imodeli engcono yokuziphatha okungalunganga kwesi siluleko somlandeli esinokukulolu hlobo kukungagxininiswa okwangoku kwiimvolsi kunye ne-waswolves, ngokubonga kwiincwadi zeTwilight kunye neefilimu, ii-copycats zazo kunye nemiboniso eyahlukeneyo yeTV.
Khawujonge le nkcazo yenkcazelo yam nqaku "Ngaba i-Vampires Real? Uza kubona uluhlu olude lwabavakalisi-ikakhulukazi abatsha abaselula, mhlawumbi - abaye bafezekisa iinyani ngokwenene kwaye bakholelwa ukuba i-vampires kunye ne-waswolves ziyinyani. ukuba ziyimivumbo okanye i-werewolves ... okanye zifuna ukuba. Iimbono zabo ngokwenene zihlaziyi ezibuhlungu ebomini babo kunye nesimo se-American culture.
Kodwa le nto iyancipha, ininzi, ayiyingozi kwininzi. Kuya kudlula kunye nobutsha babo ne-naiveté. Ndiyayika, nangona kunjalo, ukungabikho komonakalo kunye nenzakalo engabangela ukuvuswa kwebala.
UKUQHUBANA NEMPILO: UKWENZA OKWENGEZIWEYO
Njengoko ndithethile ngasentla, ukuba lo mboniso uphumelele, unokulindela okunye okufanayo ... kwaye ngakumbi:
URalph Nebbish, iDonorhood Demonologist
UMthetho kunye noMyalelo: I-Demon Squad
Iingelosi zeCharlie ... kunye needemon
AbaPristi 'n' Pitchforks
Iholide yeShilo - Ngokwenene
... yakha umboniso wakho.
Iindaba eziNyaniso zeNkcazo eziMangalisayo
I-Doppelgangers - Iindaba eziNyaniso
Kutheni iNgqungquthela yaseTurin yiNkohlakalo
I-Strange kunye neNkqenkqileyo yamanzi
Ngaba Abantwana Abantsundu Abama-Black Eyed or Hoax?
Iimfihlakalo Zabantu - Iindaba Eziyinyaniso
Isiprofeto sesithathu seFatima sityhilwa
Ingaba Unayo I-Angel Guardian?
Ukunqoba Umfazi we-Aquarius - Iimpawu Zothando
Ziziphi i zihlomelo?
Top 10 Belle ne Sebastian Iingoma
Izixhobo ezifunekayo Ukudlala iThayilo yeTable
Iintlanzi ezinkulu ze-Crane, Family Tipulidae
Ubunzima bePlanga kunye nobukhulu: Ukufuna iGrail engcwele
Amashishini ama-Majors 101- Ukulungiselela iSikolo seShishini kunye neNgaphandle
NgesiFrentshi, 'I-Poser unombuzo,' Awuyi 'Ukufuna isicelo'
IZibhalo zeKrisimesi ezivela kwiNcwadi kaMormoni
Uluhlu lweeNqabana zase-US
UbuHindu yiDharma, Akunjalo inkolo
I-Best Drake Iingoma Zonke Ixesha
I-Alphabet International Phone Alphabet (IPA)
Indlela yokufundisa i-Present Perfect
Iintsuku zeeNkcazo eziqokelelweyo (ADD) zibalwa njani?